hafatra nampitaina dia nampitaiko koa e | GAZETY_ADALADALA
hafatra nampitaina dia nampitaiko koa e
De: »mbudu duala »
Cc: »sera »
ZAVA-MIAFINA LEHIBE MOMBA AN’I MADAGASIKARA
Vakio tsara ity, mivavaha, aparitao hatraiza hatraiza, ataovy tonga any amin’ireo Kristiana olon-tsotra, ireo mpitondra Fiangonana sy mpitarika fivavahana, ireo Toby Fifohazana, raha mety, ataovy peta-drindrina, fa maika ny hafatra, maika ny Tompo, vonjeo ny Firenenao !
Fanambarana avy amin’ilay lehilahin’Andriamanitra, mpanompo sady olom-pahasoavana.
Momba ny harenaben’i Madagasikara sy ny fahantran’ny vahoaka Malagasy
* Andriamanitra nametraka harena maro sarobidy eto Madagasikara : harena ambonin’ny tany, harena ambanin’ny tany, zavaboaary tsisy mpanana, tany midadasika, ireo rehetra ireo mba ho an’ny Malagasy, saingy tsy manana ny toe-panahy mendrika ireo harena soa napetraky ny Tompo ao amin’ny taniny ireo ny Malagasy, any ka tsy afaka manjaka amin’ireo harena voajanahary ireo, fa voatery miantso firenena afa hitrandraka ny harenany.
* Tsy hiala amin’ny fahantrany i Madagasikara raha tsy miverina amin’Andriamanitra avokoa ny Malagasy, izay no takian’ny Tompon’ny harena : “Ary ataovy izay mahitsy sady tsara eo imason’ny Tompo mba hahita soa ianao ary mba hidiranao handova ny tany soa” Deo 6:18.
* Tsy ampy handresena ny fahantrana eto Madagasikara ny tetikasa, ny programme, ny vokatry ny asa saina, fa iray ihany no lalana sy vaha-olana : “Madagasikara ho an’i Kristy ary Kristy ho an’i Madagasikara” : “Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany” Matio 6:33.
Momba ny fisian’ny korontana miverimberina eto Madagasikara.
* Midadasika loatra i Madagasikara, maro no mbola tany maizina, tsy tratry ny Filazantsara ary tsy resy hatramin’izao ny herin’ireo fanahy ratsy avy amin’ny fanompoan-tsampy, ny fanaon-drazana isan-karazany, ny fanaovana ody gasy sy famosaviana, sy ny sisa, fa miparitaka hatraiza hatraiza : “Fa isika tsy mitolona amin’ny nofo aman-drà fa amin’ny fanapahana sy amin’ny fanjakana sy amin’ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao, dia ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra” Efes 6:12.
* Misy fotoana, miha mahery be sy miha maro ireo fanahy ratsy ireo sady miampy ny fanahy ratsy avy any ivelany, avy any Afrika, Inde, Asia sy avy amin’ireo nosy manodidina, entin’ny olona mivezivezy. Rehefa mitambatra ny heriny dia miteraka korontana mahery vaika eto amin’ny Firenena.
* Maro karazana ireo fanahy ratsy ireo ary sarotra ny mandresy azy, araka ny tenin’ny Tompo manao hoe : “iny karazana iny tsy mba azo avoaka na amin’ionona na amin’inona afa-tsy amin’ny fivavahana sy ny fifadian-kanina ihany” Marka 9:29. Manjaka araka izany ny herin’ny maizina, tsy mahalala ny marina sy ny rariny intsony ny olona, tsy mahalala ny tsara sy ny ratsy, ny mety sy ny tsy mety, very ny “personnalité morale”. Izay rehetra tratran’izany herin’ny maizina izany, na iza na iza, dia tsy tompon’ny tenany intsony, romodromotra, manaonao foana satria ao anaty fisavoritahan- tsaina tanteraka.
Diniho ny fandehan’ny tantara dia ho hitanao ny fahamarinan’izany.
Mampioro-koditra ny asan’ny fanahy ratsy eto amin’ny firenena, hita sy tsapa amin’ny fihanaky ny zava-mahadomelina sy toaka, fitenenan-dratsy eny an-dalambe, asan-dahalo, asan-jiolahy, famonoana olona amin’ny fomba feno habibiana, fametavetana vehivavy sy ankizy, herisetra tsy voafehy, famonoan-tena, sy ny sisa, hita isan’andro ao amin’ny gazety. Fa ny vokany maharitra dia ny fahantrana tsy ahitana fanafany hatramin’izao fa toa vao mainka aza miha lalina hatrany.
Inona ary no fanafodiny ?
« RAHA NY OLOKO izay nantsoina tamin’ny Anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako dia hihaino any an-danitra Aho ka hanasitrana ny taniny » IITantara 7:14
1. Isika Malagasy tsirairay, izay tia Tanindrazana, aoka hanavao toetra isa-maraina, hiala amin’ny ratsy fanao, mba ho ekem-bavaka manomboka izao.
Mba ho isan’izany ve ianao ?
2. Na mpiandry ianao na tsy mpiandry, na relijiozy na tsia, ataovy isan’andro ny fandroahana ny devoly, ny demony sy satana fahavalo : “Ka dia maneke an’Andriamanitra hianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy” Jak 4:6.
Mba hanao izany ve ianao ?
3. Ny Kristiana tsirairay, aoka samy hitory amin’ny manodidina azy, mba hisian’ny fivoarana eo amin’ny fiaraha-monina. Tsy mandeha irery ny vavaka ary tsy ampy ny finoana raha tsy arahina asa : “Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy” Jak 2:17.
Hitory ve ianao sa hatory ?
4. Ny Fiangonana rehetra, na inona na inona anarana entiny, aoka hikatsaka fifohazam-panahy, hiala haingana amin’ny fanompoam-pivavahan a fahazarana ary hanao ho laharam-pahamehana sy asa mitohy ny fitoriana ny Filazantsara ivelan’ny rindrina efatry ny trano Fiangonana, “handeha hatrany amin’ny faran’ny tany” (ny morontsiraka no faran’i Madagasikara) .
Mba hanampy ny Fiangonanao ve ianao !
Aoka NY REHETRA samy hibanjina tanjona tokana ho tratrarina farany izay haingana indrindra:
“Madagasikara ho an’i Kristy ary Kristy ho an’i Madagasikara”
Matokia, mivavaha ka aza mitsahatra, miadia ny ady tsara, miasa ny asa tsara
« fa moa misy zava-mahagaga izay tsy hain’Andriamanitra va » (Gen 18:14) ary « ny zavatra rehetra dia hain’ny mino »(Marka 9:23)
Filed under: fiaraha-monina, finoana, tapatapany |
« LOZA IRAY! LOZA ROA! ‘Sit-In’ nataon’ny mpanao gazety teo Ambohijatovo (ministera) sy teny Anosy (Lapan’ny Fitsarana) »
Je vois, on 16/05/2009 at 12:15 said:
Na dia mpino kristiana tokoa aza ny tenako dia tsy mba mino izany. Aiza ny firenena eran tany tsisy mpino nefa mandroso, ary ny malagasy no atao hoe anisan’ny be kristiana ara-pourcentage ny population totale, koa aleo izay tena hampandrosoana marina an’i M/car no hodinihina
Rajoela, on 16/05/2009 at 9:28 said:
Marina daholo ireo voalaza ireo. Ny fanompoan- tsampy sy ny fivavahana amin’ ny razana dia zavatra hàlan’ i Jehovah Andriamanitra tokoa. Ary izay olona manao izany dia voaozona hatramin’ ny taranaka faha efatra mandimby. Fanompoana an’ i satana izany, ary satana dia mpandainga sy mpamono olona. Ka io no hita eto amin’ ny tantaran’ i Madagasikara hatramin’ ny taona 1500 no ho mankaty. Ny russe ohatra dia mandroso nefa atheiste ry zareo. Atheiste fa tsy mivavaka amin’ ny fanahy. Voalazan’ ny Baiboly fa izay mivavaka amin’ ny razana no ho voaozona , fa tsy izay tsy mino. Koa ario io fomba ratsy io dia ho hitanao ny fitahiana azonao. I Jesoa no hany Mpamonjy tokana, mpanelanelana amin’ olona sy Andriamanitra. Tia anao Izy. Raiso ny fanampiana hatolony.
Namanao, on 10/06/2009 at 11:51 said:
Mba manasa antsika hijery kely an-ity lien ity http://www.dailymotion.com/playlist/xzfgw_Analamanga_malagasy-taranaka-jiosy
Ramanoelina eddie, on 15/09/2009 at 10:31 said:
tena mahavariana ary mampieritrerita ny voalaza!misy ampahany maro maha_marina azy!mpitory ny filazantsara aho no manoratra,ary mampahery ny kristiana rehetra hilofo @ vavaka ho famahana an’i Madagasikara @gejan’i satana!tsy vitan’ny hafanam-po fotsiny izany fa ilaina finoana matanjaka,sy fanapahan-kevitra tsy miverina ho an’i Kristy.koa mahereza avokoa isika mivavaka sy mitory ny filazantsara eo @ faritra misy antsika!